Cunaha Cudurka (Xanuunka Jiirka) - Sababaha, ogaanshaha, daaweynta, jimicsiyada ++
Cuna xanuun (Jaw xanuun)
Xanuunka daanka iyo daanka daanka ayaa garaaci kara qof walba. Xanuunka daanka iyo isgoysyada daanka ayaa ah dhibaato waxayna ka gudbi karaan cunista calaamadaha, tayada nolosha iyo shaqada. Xanuunka daanka ayaa sababi kara dhowr arimood oo kala duwan, laakiin kuwa ugu caansan waa muruqyo muruqyada u dhow, xirta daanka, xirida / jeexitaanka. arthrosis, dhaawac, muruq xanuun muruqyo iyo cillad farsamo.
Xanuunka daanka iyo xanuunka daanka waa buuq sanqadh badan oo ku dhaca dumarka inta badan ragga. Xanuunka daanka noocan oo kale ah wuxuu sidoo kale tilmaami karaa xanuunka gudaha ama u dhaw dhagaha, wajiga, dhabannada iyo ilkaha. Nagala soo xiriir warbaahinta bulshada su'aalo ama talo bixin.
Hoos u dhaji si aad u aragto laba fiidiyoo jimicsi oo leh jimicsi kaa caawin kara xanuunka daanka.
VIDEO: 5 Lebbiska Dharka ah oo Loogu Talagalay Stiff Neck iyo Madax-xanuun Jaw
Bukaanno badan ayaa la yaaban markii aan ka war bixinno xiriirka ka dhexeeya xumaanta qoorta iyo saameynta tooska ah ee daanka. Tani waa sida murqaha murqaha ee qoorta ay xanuunka ugu gudbin karaan daanka iyo wajiga.
Halkan waxaa ah shan jimicsi iyo jimicsi fidin ah oo yareyn kara qoorta oo xanuun leh isla markaana gacan ka geysan kara hagaajinta dhaqdhaqaaqa qoorta - taas oo markaa kaa caawin karta daankaaga. Hoos guji si aad u aragto barnaamijka tababarka.
Qayb kale oo saameyn toos ah ku leh qoorta iyo daanka agagaarkaaga waa garbahaaga. Xaqiiqdii, inta badan muruqyada qoorta ee ku dhegan korka qoorta korkooda waxay ka bilaabmaan dusha sare ee garbaha garbaha. Adigoo xoojinaya kuwan, qofku wuxuu sidoo kale ku fiicnaan karaa shaqada qoorta taas oo keenta kordhinta wareegga dhiigga iyo dhaqdhaqaaqa badan. Barnaamijkan jimicsiga waa in la sameeyaa seddex jeer usbuucii si loo gaaro natiijooyin wanaagsan oo dheeri ah.
Sababaha caadiga ah iyo ogaanshaha xanuunka daanka
Qaar ka mid ah sababaha kale ee caadiga ah ee xanuunnada noocan ah waa trauma, cillad daanka, kala-baxa qayb qoob-ka-ciyaarka oo ay ugu wacan tahay dareeraha jilicsan ama wixii la mid ah, xiisadda murqaha, si kadis ah oo xad-dhaaf ah, ku-soo-noqnoqosho waqti ah, osteoarthritis-da la xidhiidha da'da ama dhaawac. Had iyo jeer waa isku dhafan sababaha xanuunka u keena daanka, marka waxaa muhiim ah in dhibaatada loo daweeyo qaab guud, iyada oo la tixgalinayo dhammaan qodobbada.
Dhaawac kasta oo ku dhaca daanka daanka waxaa badanaa lagu baari karaa khabiir muruqyada leh xuquuqaha gudbinta (chiropractor ama wixii la mid ah), waxaana sii xaqiijiyey MRI halkaas oo loo arko inay lagama maarmaan tahay.
Maxaan sameyn karaa xitaa xanuunka?
Alaabada lagu taliyay ee xanuunka yareynta xanuunka muruqyada iyo kalagoysyada
Calaamadaha xanuunka daanka iyo daamanka oo xumaada
- Xanuun ku dhaca wadajirka daanka
- Xanuun qaniinyo
- Muruqyada daanka oo adag
- Dillaac daanka
- Daanka xiran
- Dareen ah inuu dhagax ku jiro daamanka daamanka
Kala soocida xanuunka daanka
Dareeraha xanuun ayaa loo qaybin karaa ba'an, subacute og chronic xanuun. Xanuunka daanka daran wuxuu la macno yahay in qofku uu xanuunsanayay daanka wax ka yar saddex toddobaad, subacute waa muddadda u dhaxaysa saddex toddobaad illaa saddex bilood iyo xanuunka haya in ka badan saddex bilood waxaa loo kala saaraa mid daba-dheer. Sidii hore loo sheegay, xanuunka daanka ayaa laga yaabaa inuu u sabab yahay lugaha, dhaawacyada meniscus, kacsiga muruqyada, cillad wadajirka iyo / ama osteoarthritis. Dhakhtarka loo yaqaan 'chiropractor' ama khabiir kale ee muruqyada, lafaha iyo cilladaha dareemayaasha ayaa baari kara cudurkaaga waxayna ku siin karaan sharaxaad buuxda oo ku saabsan waxa laga qaban karo marka la eego daweynta iyo waxa aad kaligaa ku sameyn karto. Hubso inaadan xanuun ku xanuun daanka muddo dheer, halkii aad la tashan laheyd khabiir oo aad ogaatid sababta xanuunka.
Ugu horreyn, qiimeyn farsamo-gacmeed ayaa lagu sameyn doonaa halka uu takhaatiirta fiirinayo qaabka dhaqdhaqaaqa daanka ama wixii ka maqan. Waxay kaloo baaraysaa murqaha murqaha, xoogga muruqyada, iyo baaritaanno gaar ah oo takhtarka takhaatiirta u siiya calaamad u ah waxa sababa xanuunka qofka daanka. Haddii ay jiraan cabasho daanka, baarista ogaanshaha sawirka ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto. Dhakhtarka loo yaqaan 'chiropractor' iyo daaweeyaha gacanta ayaa labadaba xaq u leh in loo gudbiyo baaritaannada noocan oo kale ah ee raajada, MRI, CT iyo ultrasound. Daaweynta konserfatifku had iyo jeer waa u qalantaa isku dayga dhibaatada noocaas ah waqti dheer ka hor intaadan u baahan inaad ka fiirsato qalliinka xaaladaha daran. Daaweynta aad helaysaa way ku kala duwanaan doontaa iyadoo ku xidhan wixii la helay intii lagu jiray tijaabada caafimaad.
Daaweynta kahortagga ee xanuunka daanka
Waxaa jira dhowr daaweyn oo muxaafid ah oo lagu daaweynayo xanuunka daanka iyo kacsiga daanka. Waa kuwan liiska qaar ka mid ah:
- Daaweynta cirbadaha / cirbadaha
- Isku-hagaajinta wadajirka ah ee loo yaqaan 'Chiropractic / wadajirka wadajirka ah
- Duugista / shaqada unugyada jilicsan
- Daaweynta gunti murqaha / daaweynta dhibcaha kicinta
- Daaweynta Ultrasound
Jimicsiyo, talooyin iyo tababarro
Daaweynta cirbadaha: Saamayn caafimaad ahaan la xaqiijiyay oo ku saabsan ka bogsashada xanuunka daanka.
Daraasad RCT (daraasad xakameyn kala-sooc ah) oo lagu daabacay joornaalka 'Journal of Orofacial pain' ee 2010 (Fernandez Carnero et al) ayaa muujisay in daaweynta dhibcaha kiciya daanka (kiiskan 2x daaweyn cirbadeyn loogu talagalay xanjo / masseter) waxay u muuqatay inay yareyso astaamaha ayna wanaajiso shaqeynta. Bukaanka daraasadda sameeyay waxay la kulmeen horumar xagga qaabk u xanuun yar iyo furuuruc farqiga ka dib daweynta. Gabagabadii daraasaddu waxay ahayd sidan soo socota:
«Codsiga u -baahanidda qalalan ee loo adeegsado TrPs -ga firfircoon ee muruqa baaxad leh ayaa sababay koror aad u weyn heerarka PPT iyo furitaanka daanka ugu sarreeya marka la barbar dhigo baahida qalalan ee shamaca ee bukaannada qaba TMD myofascial. » (Fernandez Carnero iyo al, 2010)
PPT halkan waxay u taagan tahay heerka cadaadiska, af-noorwiijigana wanaagsan waxaa loo tarjumi karaa sida cadaadiska cadaadiska. Sidaa darteed, bukaanku wuxuu hoos u dhigay awoodda isku buuqidda iyo awoodda sare ka hor inta uusan dhaawacmin xanjada.
Haddii aad leedahay cirbadeynta cirbadda, markaa muruqyadan sidoo kale waa la daaweyn karaa iyada oo aan cirbado lahayn - ka dibna daaweynta dhibcaha kicinta / daaweynta murqaha muruqyada / acupressure (cadaadiska ka soo baxa murqaha firfircoon).
Daaweynta xanuunka loo yaqaan 'chiropractic treatment' ee xanuunka daanka
Hadafka ugu weyn ee dhammaan daaweynta xanuunka loo yaqaan 'chiropractic treatment' waa in la yareeyo xanuunka, kor loo qaado caafimaadka guud iyo in la kordhiyo tayada nolosha iyadoo dib loo soo celinayo shaqadii caadiga ahayd ee nidaamka muruqyada iyo habdhiska dareenka. Xaaladda xanuunka daanka, lafopractor wuxuu daweyn doonaa daanka gudaha si loo yareeyo xanuunka, loo yareeyo cuncunka loona kordhiyo bixinta dhiigga, iyo sidoo kale soo celinta dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee qoorta, dhabarka sare iyo inta u dhexeysa garbaha. Markaad dooranaysid istiraatiijiyad daaweyn ah oo loogu talagalay bukaanka shakhsi ahaaneed, lafopractor wuxuu xooga saarayaa inuu arko bukaanka xaalad guud. Haddii uu jiro shaki ah in daanka xanuunku u yahay cudur kale, waxaa laguu gudbin doonaa baaritaan dheeri ah.
Muxuu qabtaa dhakhtarka loo yaqaan 'chiropractor'?
Murqaha, wadajirka iyo neerfaha: Kuwani waa waxyaabaha lafopractor ka caawin karo kahortagga iyo daaweynta. Daaweynta lafdhabarta badanaa waxay ku lug leedahay soo celinta dhaqdhaqaaqa iyo shaqada wadajirka ah ee laga yaabo inay wax u dhinto xanuunka farsamada. Tan waxaa lagu sameeyaa waxa loogu yeero hagaajinta wadajirka ah ama farsamooyinka wax-qabadka, iyo sidoo kale abaabul wadajir ah, farsamooyin iskala-bixin ah, iyo shaqeynta muruqyada (tusaale ahaan kicinta dhibcaha kicinta iyo la shaqeynta unugyo jilicsan oo qoto dheer) muruqyada ku lug leh. Qaar ka mid ah lafopractors sidoo kale waxay isticmaalaan acupuncture, daaweynta mowjadaha cadaadiska, daaweynta laser iyo farsamooyinka la midka ah - tani waa wax ku xiran shakhsiyadeed iyadoo kuxiran daaweynta. Shaqada oo kordha iyo xanuunka oo yaraada, waxay u sahlanaan kartaa shaqsiyaadka inay galaan dhaqdhaqaaq jireed, taas oo iyaduna saameyn togan ku yeelan doonta tamarta iyo caafimaadka labadaba.
Duugista daaweynta xanuunka daanka
Duugista waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo wareegga dhiigga ee aagga sidaa darteedna loo yareeyo xiisadda muruqyada, taas oo iyaduna horseedi karta xanuun yar. Tan waxaa badanaa loo adeegsadaa isku darka daweynta dhibcaha.
Jimicsiyada, tababarka iyo tixgelinta ergonomic.
Khabiir ku takhasusay murqaha iyo xanuunnada qalfoofku waxay, iyagoo ku saleynaya ogaanshahaaga, kuu sheegi karaan tixgalinta ergonomic ee aad u baahan tahay inaad ka hortagto waxyeelo kale, sidaas darteed hubinta waqtiga ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah ee bogsashada. Kadib markii qaybta xanuunka ee xanuunku dhamaato, kiisaska badidooda waxaa sidoo kale lagugu meeleyn doonaa laylisyo guriga ah oo waliba kaa caawinaya yareynta fursada soo noqoshada. Marka ay jiraan xanuunno daba-dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la maro dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa ee aad sameyso nolol maalmeedkaaga, si aad u awood u leedahay inaad u xakameyso sababta xannuunkaaga u dhacayo marar badan. Waa muhiim in jimicsiga shaqsiyeed la waafajiyo adiga iyo jirrooyinkaaga.
- Halkan waxaad ka heli doontaa dulmar guud iyo liistada layliyo aan daabacnay oo la xiriira ka-hortagga, ka-hortagga iyo gargaarka xanuunka daanka, daanka xanuun, daanka adag, daanka osteoarthritis iyo baaritaanno kale oo la xiriira.
Guudmarka - Jimicsi iyo jimicsi xanuunka daanka iyo daanka xanuun
Lecture ama ergonomic ayaa ku habboon ganacsigaaga?
Hadaad ubaahantahay casharo ama ergonomic ku habboon shirkaddaada, fadlan nala soo xiriir. Daraasadaha ayaa muujiyey saameynta togan ee tallaabooyinkan oo kale ah (Punnett et al, 2009) qaab dhimis fasax jirro iyo kordhinta waxsoosaarka shaqada.
Arimaha la xiriira:
- Glucosamine sulfate ka dhanka ah osteoarthritis (Akhri sida glucoseamine ay u muujisay saameyn weyn osteoarthritis)
- Myalgia / trigger dhibic ee cirridka, masseter. (Baro sida looga takhaluso murqaha daanka muruqyada)
NHI - Xogta Caafimaadka ee Noorway
Fernandez-Carnero iyo al. Saameynta muddada-gaaban ee cirbadaha qallalan ama firfircoonida myofascial waxay dhaliyaan dhibco muruqyada 'masseter' ee bukaanka qaba xanuunnada naxdinta leh. J orofac Pain. 2010 Winter;24(1):106-12.
Suugaanta lagu taliyay in si fiican loo fahmo xanuunka daankaaga (oo markaa xal fiican loo helo):
Halkan ka aqri faahfaahin dheeraad ah: Qorshaha Bogsiinta TMJ: Toban tilaabo oo lagu kabayo madax xanuun, Qoorta oo xanuun ah iyo Cudurada Foosha (Xulasho fiican oo caafimaad)
S: Acupuncture loogu talagalay xanuunka daanka iyo daanka?
Jawaab: Sida lagu sheegay maqaalka, daaweynta acupuncture / irbadda waxay saameyn muuqata ku leedahay xanuunka muruqyada. Daaweynta cirbadda ayaa markaa loogu talagalay cirridka weyn, masseter. Akhri qodobka hore si aad u aragto natiijada daraasadda oo dhammaystiran.
S: Welwelka iyo culeyska fekerku ma ka sii dari karaan ama dhaawici karaan daanka?
Jawaab: Haa, walwal iyo walaac ayaa muruqyada ka muuqan kara sidaasna ku keeni kara xanuun daanka iyo xanuun daanka oo kordha.
S: Waa sidee caabuq ku dhaca daanka?
Jawaab: Caabuqa daanka ayaa sababi kara calaamadaha bararka caadiga ah. Tani waxay macnaheedu noqon kartaa kuleylka maqaarka ee daanka, qandho, lallabbo, iyo sidoo kale maqaarka casaanka iyo barar suurtagal ah oo ku yaal aagga ay dhibaatadu gaadhay. Cudurka daanka ayaa ka jawaabi doona daawooyinka NSAIDS. Waa muhiim inaad ogaato sababta aad ugu xanuunsatay daanka, markaaba la xiriir GP-gaaga sida ugu dhaqsaha badan.
Su'aalaha la xiriira ee isla sharaxaadda: 'Maxay yihiin astaamaha caabuqda laf-dhabarka?'
Aad yeelato daanka xanuun iyo xanuun min dheg ilaa af - maxaa sababi kara?
Inta udhaxeysa dhegta iyo geeska afkiisa, qeybtaas waxaan ka helaynaa daanka iyo daanka si wadajir ah. Markaa waxay u egtahay - iyadoo lagu saleynayo sharaxaaddaada kooban - sida haddii aad ula jeedo aaggan, oo waxaan ula jeednaa in tani ay sababi karto xiisadda daanka, muruqyada ciriiriga / hawlgabka ee daanka iyo qoorta - iyo sidoo kale xannibaadaha wadajirka ah ee la xiriira (sidoo kale loo yaqaan 'qufulka') qoorta. Waxay sidoo kale noqon kartaa cunsur in daanka uu jiri karo xirmo / osteoarthritis, laakiin tani waa mala awaal ku saleysan waxaad noo sheegto.
Su'aalaha la xiriira oo leh jawaab isku mid ah: "Maxay noqon kartaa sababta aan xanuun ugu hayo wadajirka daanka iyo dhegta midig?"
Wuxuu dhaawacay laabatada daanka iyo gaar ahaan markaan calaliyo. Maxuu yahay sababta xanuun xanuun daanka marka aan calaliyo oo aan cuno?
Xanuunka daanka laftiisa iyo xanuunka daanka markii la calaliyo ayaa sababi kara dhowr arrimood. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waa, sidii hore loo soo sheegay, murqaha daanka oo kacsan iyo xanaaqa xanaaqa oo aan ku aragno laabatada daanka. Waxa kale oo laga yaabaa inaad khaladaad ku yeeshaan booska ilkaha ee kuu keenaya inaad walwasho hal dhinac ka badan dhinaca kale.
Su'aalaha la xiriira oo isla jawaab ah: 'Dillaac ayaa ku dhacay daanka markii aad calaacalaysay dhawr sano. Waa maxay sababta?
S: Xanuun ku haya gudaha daanka oo leh badhanka la socda. Maxaan u hayaa
Jawaab: Hal sabab oo xanuun ah daanka dhexdeeda oo ay ku jirto xoqid ama riixid ayaa laga yaabaa inay tahay kala-goys xanniban oo la xidhiidha xanaaqa xanaaqa. Badanaa, daaweynta mufakiriinta oo ah qaab lagu sii daayo dhaqan-dhaqaale iyo isu-duwidda wadajirka ah ayaa gacan ka geysan karta cudurrada noocaas ah.
- Su’aalo la mid ah oo isku jawaab ah: «Xanuun ka qabo daanka oo ku dheggan gudaha daanka. Sababta? "
S: Xanuun ku qabo daanka iyo dhegta isla dhinac ah. Sababta?
Jawaab: Sababaha caadiga ah ee xanuun ee daanka iyo dhegta isku wakhti ayaa laga yaabaa in xanuunka loo gudbiyo masaafad (murqaha waa weyn ee la calaliyo) ama SCM (qoorta wareegaya muruqa) - labada muruq ee gudaha afka, marinka wadnaha iyo marinka jirka ee lafdhabarta ayaa sidoo kale inta badan ku lug leh xanuunada noocaas ah. Waxa kale oo laga yaabaa inay sabab u ahaato isku xirnaanta / gogosha kala goysyada qoorta kore, maadaama kuwaan si xoog leh ugu xiran yihiin kala-baxa daanka.
S: Waxaan leeyahay xanuun daanka iyo daanka ah oo xanuun ah markaan cuno buskudka iyo cuntooyinka kale ee adag. Waxa kale oo ku xanuunaysa inaad afkaaga aad u kala furto. Sababta
Jawaab: Jaw xanuun waa calaamad muujinaysa in daankaagu leeyahay nooc dhibaato ah. Xanuun ku dhaca daanka markaad calaacashid rootiga cowska ah wuxuu muujinayaa in daanka laftiisa laftiisu uusan sifiican u dhaqaaqin oo laga yaabo inaad yeelatid xanaaqa daanka meniscus - oo si gaar ah u muuqda markii daanka si buuxda loo furay. Waxay noqon kartaa mid waxtar leh in la isku dayo daaweynta muxaafidka ah, tusaale ahaan lafopractor, iwm, marka loola jeedo gaar ahaan howlaha wadajirka ah iyo muruqyada daanka oo adag (akhri: masseter).
S: Daansi xanuun ka dib booqashada ilkaha. Maxaan u hayaa
Jawaab: Xanuun ama daanka ka dib booqashooyinka ilkaha maahan wax aan caadi ahayn. Tan badanaa waa sababta oo ah waxa lagaa tegay si furan oo furan muddo dheer, taas oo culeys ku-meel-gaadh ah ku ah muruqyada daanka iyo laabatooyinka daanka. Caadi ahaan, daankaagu waa inuu u adkeystaa walaacaas, laakiin waxaa laga yaabaa inuu daankaagu durdur ahaan yara yaraaday sidaa darteedna uu lahaa awood ka yar sidii uu ula tacaali lahaa dhibaatadan. Haddii xannuunku aanu ahayn mid ku-meel-gaadh ah, waa inaad la xiriirtaa dhakhtarkaaga ilkaha oo aad weydiisaa haddii tani ay tahay falcelin dhinaca dhinaceeda ah oo ku saabsan hawlgalkii uu qabtay.
S: Maxay yihiin daamanka iyo isku-xidhka daamanka ee Ingiriisiga?
Jawaab: Jaw waxaa loo yaqaan daanka Ingiriisiga. Isku-xidhka jaw ka dib wada-jirka daanka ama isku-dhafka ku meel gaarka ah, oo sidoo kale loo yaqaan TMJ
S: Maxaa lagula talinayaa nasashada daanka iyo murqaha daanka oo kacsan?
Jawaab: Sidaan idhi, inta badan laabatooyinka sare ee qoorta, murqaha qoorta kore, murqaha daanka iyo kalagoysyada daamanka ayaa si dhow ugu xiran si caadi ah. Sidaa darteed, macno ayey leedahay inaad raadsato daaweeye muruqyada ah haddii aad isku aragtid xanuun daanka ama soo noqnoqda daanka. Daaweeyaha noocan ah wuxuu awood u yeelan karaa inuu kuu sheego sida saxda ah ee aad sameyn lahayd si ugu fiican wax looga qabto dhibaatadaada. Qaarkood waxay kugula talinayaan ama yoga iyo fikirka sidii waddo wanaagsan oo lagu gaaro nasashada jirka.
S: Wuxuu leeyahay cagaarshow / dhexdhexaad daran. Ma jiraan wax daaweyn ah oo loo yaqaan 'osteoarthritis'?
Jawaab: Xaqiiqda ah inaad qabtid osteoarthritis macnaheedu maahan muruqyada iyo kala-goysyadu inaysan u baahnayn shaqo wanaagsan. Hase yeeshe, si liddi ku ah, waxaad u baahan tahay shaqo muruq oo ka wanaagsan, maaddaama osteoarthritis ee daanka wadajirka ahi si dabiici ah u xaddido shaqada wadajirka ah.
S: Botox miyuu u yahay daweyn wanaagsan xanuunka daanka iyo daanka?
Jawaab: Botox, oo loo yaqaan Botulinum toxin, waa cudurka ugu sunta badan adduunka ee neurotoxin. Dalka Mareykanka, qof kasta oo ku shaqeeya cirbadaha Botox waa inuu ka digaa in cirbadda ay ka faafin karto aagga maxalliga ah ee lagu duro sirinjeerka ayna sababi karto astaamo u dhigma sumowga iyo, xaaladaha ugu xun, dhimasho. Tani waxay dhacdaa si aad u yar, laakiin weli waa khatar. Gunaanadkeenu waa in Botox uu noqdo meesha kuugu dambaysa ee daaweynta xanuunka daanka iyo daanka.
- Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sunta Botulinum halkan on Wikipedia.
S: Waan ilkaha xoqaa habeenkii. Maxaa laga qaban karaa tan?
Jawaab: Haddii ilkaha aad shiiddo, oo sidoo kale loo yaqaanno bruxism, ay sabab u tahay xiisadda muruqyada daanka - markaa waxaa lagugula talinayaa inaad ka raadsato daaweyn dhibaatadaada khabiir muruqyada ah oo aad aragto haddii daaweyn kasta ay saameyn ku leedahay shiididda habeenkii. Suurtagal ahaan qofku wuu awoodaa habeen iftiin waxaa loo isticmaalaa in looga hortago iftiinka habeenkii. Daawooyinka waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa xoqidda habeenkii, sida cipralex iyo tiagibine, laakiin tan waxaa kaliya la sameeyaa kadib marka lala tashado GP. Xoqidda ilkaha sidoo kale waxaa loo yaqaan Bruxism.
Miyuu sciatica sababi karaa xanuunka daanka?
Marka waxaad isweydiineysaa haddii dareemaha sciatic ay sababi karaan xanuun daanka iyo xanuun daanka. Sababta jir ahaan looma isticmaali karo. Dareemayaasha cilladaha waxay ka soo baxaan dhabarka hoose waxayna kaliya u horseedi karaan calaamadaha dareemayaasha / xanuunka lugaha. Si loo helo xanuunka neerfaha daanka, waa in ay jiraan dareemo kale oo maxalli ah oo dhejisan / xanaaqa.
Ma ku dhici kartaa xanuun daanka ah oo raaga, muddo dheer soconaya?
Xilliga daba-dheer sida erayga badanaa loo isticmaalo - waxay ka dhigan tahay in xanuunka / astaamaha ay sii jiraan in ka badan 3 bilood. Dad badan ayaa u maleynaya in dabadheeraadku macnaheedu yahay inaysan macquul ahayn in wax laga qabto dhibaatada, laakiin tani waa khalad. Waxa saxda ah, si kastaba ha noqotee, waa in laga yaabo inay u baahan tahay xitaa daaweyn dheeri ah iyo tallaabooyin la waafajiyay si loo gaaro horumar.
Miyaa qofku xiran karaa daanka?
Sida dhammaan xubnaha kale, sidoo kale waad xirxi kartaa daanka isku-jirka. Xiro sidoo kale waxaa loo yaqaan isbedelka degenaanshaha ama osteoarthritis.
S: Nin, 30 sano oo xanuun ka qaba dhegta iyo daanka - miyuu walwal iyo nolol maalmeed xamaasad leh oo ay weheliso xiisad muruq badan ayaa sababi kara?
Hi, xaqiiqdi. Murqaha murqaha ee murqaha ciridka oo ay weheliso xayiraad wadajirka ah oo ku taal qoorta iyo myalgia laxiriirta ayaa xanuun u horseedi kara dhegta iyo daanka. Waxaan kugula talineynaa in uu ku baaro dhakhtar haddii tani ay tahay dhibaato waqti dheer ama soo noqnoqota. Maareynta walbahaarka iyo jimicsiyada neefsashada si loo yareeyo buufiska waa in sidoo kale la tixgeliyaa.
S: Daroogada ka dhanka ah Bruxism iyo riyooyinka qarow?
Jawaab: Cipralex iyo Tiagibine labaduba waa daroogo yareyn kara riyada. (Xigasho: Kast et al, 2005 - akhri daraasadda iyada).
Dareenka daanka iyo xanuunka daanka miyay sababi karaan madax xanuun?
Myalgiyada iyo muruqyada cidhiidhiga ah ee daanka iyo daanka ayaa gacan ka gaysan kara labada ilmo galeenka (qoorta la xidhiidha) iyo madax-wareerka walaaca leh. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay xaqiiqda ah in muruqyada daanka ay si dhow isugu xiran yihiin, si shaqeysan u hadlaya, kala-goysyada sare ee qoorta (C1-C2) iyo in kuwani ay saameyn toos ah ku leeyihiin midba midka kale. Muruqyada daanka oo adag ayaa markaa wax ka geysan kara qoor adag - iyo taa lidkeed. Waa mid gaar ah masaafad (cirridka weyn), pterygoids medial iyo lateral, iyo muruqyada kumeelgaarka oo la ogyahay inay gacan ka geystaan ​​madax xanuun iyo madax xanuun. Waxaan kugula talineynaa inaad tijaabiso layliyada aan horay ugu soo sheegnay qormada si aad u wanaajiso shaqada daankaaga iyo xoogga daankaaga.
Su'aalaha la xiriira isla jawaabta: 'Madax xanuun ayaa ku dhaca madax xanuun ka dib daanka. Waa maxay sababtu?
Eygaygu ma yeelan karaa daanka oo xanuuna?
Dabcan, eeyadu sidoo kale waxay heli karaan xanuunka daanka iyo daanka xanuun. Sidayada oo kale, iyaguna waxay ka samaysan yihiin muruqyo, muruqyo, neerfayaal, kala-goysyo iyo lafo - oo sidaas oo kale, sideena oo kale, ayay saameyn ku yeelan karaan xanuunnada muruqyada, kala-goysyada iyo neerfayaasha. Ma ogtahay, tusaale ahaan, in daaweynta mawjadaha cadaadiska ayaa la caddeeyay inay waxtar u leedahay eeyaha qaba muruqyada osteoarthritis?
S: Muruq ma ku ridi kartaa daankaaga?
- Haa gabi ahaanba, Mid ka mid ah sababaha ugu macquulsan ee xanuunka daanka ayaa ah muruq xanuun ama murqaha muruqyada daanka. Muruqyada ugu caansan ee noqda mid xad dhaaf ah waa masaafad (calaalinta murqaha) - laakiin sidoo kale muruqyada qoorta kore, sida suboccipitalis, iyo sidoo kale kala-goysyada qoorta sare (badanaa C0, C1, kala-goysyada C2), waxay gacan ka gaysan karaan xanuunka daanka. Waxaan kugula talineynaa inaad waxbadan ka akhriso muruqyada muruqyada gaarka ah ee aan kor ku xirano, iyo sidoo kale inaad aqriso Maqaalkayaga ku saabsan garaaca muruqyada iyo qodobbada kiciya iyo sida ay u dhacaan.